Amathuluzi Wobumfihlo: Iwebhusayithi Ebalulekile Futhi Esebenzisekayo Yobumfihlo Be-Inthanethi Kusuka kuLinux
UbumfihloAmathuluzi: Iwebhusayithi ebalulekile futhi ewusizo yobumfihlo obuku-inthanethi
Izolo sihlole iwebhusayithi ebizwa ngokuthi "Umthombo Ovulekile Omangalisayo" ubuhle bayo ukuthi bunikeza okuhle futhi okukhulu Ikhathalogi Yezinhlelo Zokusebenza ezivulekile, ngenkathi namuhla sizohlola okunye okufana kakhulu, kepha kuhloswe ngakho ukuthuthukisa i- ubumfihlo be-inthanethi zazo zonke izakhamizi, ogama lazo lingu UbumfihloAmathuluzi.
UbumfihloAmathuluzi iyiwebhusayithi ebalulekile futhi ewusizo ye- ubumfihlo be-inthanethi, okuhlinzeka ngezinsizakalo, amathuluzi nolwazi kubasebenzisi abaningi ukuvikela i- ubumfihlo ngokumelene ukubhekwa komhlaba wonke.
I-NoGAFAM: Iwebhusayithi ethokozisayo nokunyakaza kweSoftware Emahhala
Ngaphambi kokufaka ngokugcwele ukuphawula kuwebhusayithi ye UbumfihloAmathuluzi, Kuyaphawuleka ukuthi kwezinye izikhathi siye saphawula ngamanye amasayithi afanayo, njenge I-NoGAFAM, esikuchaza encwadini eshiwo ngaphambilini kanjena:
"INoGAFAM yisayithi elingagcini nje ngokuthuthukisa i-Free Software, kodwa futhi eligqugquzela abanye ukuthi bazi ngenani lemininingwane ekhiqizwe ku-Intanethi, kanye nobungozi ababa nabo lapho besebenzisa amapulatifomu, izinhlelo zokusebenza kanye nezinsizakalo zamaGiant Technological amaningi omhlaba, abaningi okwaziwa ngokuthi yiGAFAM". I-NoGAFAM: Iwebhusayithi ethokozisayo nokunyakaza kweSoftware Emahhala
Ngenkathi enye okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene, esincoma ukuthi sibuyekeze noma sifunde okokuqala ngqa okulandelayo:
Inkinga yama-Social Networks: Futhi kuma-Operating Systems?
Lapho futhi sinokuxhumana nabanye abaningi okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene ngobubanzi be:
I-cybersecurity, Ubumfihlo kanye Nokungaziwa ku-inthanethi.
Futhi ekugcineni, okulandelayo kucace, ukuthi igama limeleni I-GAFAM:
I-GAFAM ne-Free Software Community: Ukulawula noma Ubukhosi
1 UbumfihloAmathuluzi: Iwebhusayithi yobumfihlo be-inthanethi
1.1 Yini amathuluzi wobumfihlo?
1.2 Amathuluzi Wobumfihlo Aku-inthanethi anconyiwe
UbumfihloAmathuluzi: Iwebhusayithi yobumfihlo be-inthanethi
Yini amathuluzi wobumfihlo?
Ngokwakho Iwebhusayithi esemthethweni, ichazwa ngale ndlela elandelayo:
"Ubhekiwe. Kokubili izinhlangano ezizimele kanye nalezo ezixhaswa ohulumeni ziqapha futhi ziqopha imisebenzi yakho kunethiwekhi. imfihlotools-en inikeza ulwazi namathuluzi wokuvikela ubumfihlo bakho ekulandeleni umhlaba ngabasebenzisi. Futhi silinganisa umphakathi ochumayo wabantu abanomqondo wobumfihlo onjengawe ukuxoxa futhi ufunde ngentuthuko entsha ekuvikeleni idatha yakho ku-inthanethi. Le webhusayithi ingumongo wenhlangano yethu, lapho sicwaninga futhi sincoma izixazululo ezahlukahlukene zesoftware yomphakathi wethu."
Phakathi kokuvelele kwewebhu singagqamisa amaphuzu alandelayo:
Ukubonisa ngale kokuqukethwe okunikelwe ukufeza izincomo eziqinile nezithembekile.
Bayinhlangano engenzi nzuzo.
Baqinisekisa abasebenzisi ukuthi izincomo zabo azikhokhelwa noma ngaphansi kwezinhlelo zokubambisana.
Izimali zakho zinikezwa ngokuphelele ngabaxhasi bakho nabaxhasi bakho.
Umsebenzi wabo ukusabalalisa imfundo yobumfihlo nokukhuthaza izinsizakalo ezenziwa online njengeMastodon, iMatrix, ne-WritFreely.
Amathuluzi Wobumfihlo Aku-inthanethi anconyiwe
Le webhusayithi ithande, phakathi kwezinto eziningi, leyo enikeza izincomo zayo izinsiza, amathuluzi nolwazi ezindabeni ze ubumfihlo be-inthanethi, uwahlukanisa abe Izigaba ze-5 okuyi:
Yize isikhombimsebenzisi sayo sise- Ulimi lwesiNgisi, ine- indawo yesibuko en Ulimi lwesiSpanishi, Kokulandelayo isixhumanisi. Kusukela manje kuqhubeke kukhona ukuthakazelisa okuthakazelisayo kwale webhusayithi ukusebenzisa lonke ulwazi emkhakheni we ubumfihlo be-inthanethi ukuthi linikeza.
Ekugcineni, njengokungeziwe sincoma ukuhlola lokhu okulandelayo izixhumanisi ezihlobene ukuqinisa ngokwengeziwe ulwazi lwethu endaweni ebaluleke kangako Ukuphepha kolwazi futhi / noma Ukuphepha Kwe-IT:
Izixhumanisi Eziwusizo Ekuvikelekeni Kwekhompyutha.
Uhlu Lokuhlola Ukuvikelwa Kwemininingwane noma iManuwali Yokumelana Nokubhekwa Konxiwankulu.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «PrivacyTools», iwebhusayithi ebalulekile futhi ewusizo ye- ubumfihlo be-inthanethi, okuhlinzeka ngezinsizakalo, amathuluzi nolwazi kubasebenzisi abaningi ukuvikela i- ubumfihlo ngokumelene ukubhekwa kobuningi bomhlaba jikelele; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » UbumfihloAmathuluzi: Iwebhusayithi ebalulekile futhi ewusizo yobumfihlo obuku-inthanethi
I-HumHub 1.7.1: Uhlobo olusha lwe-Open Source Social Network SW
UTim Berners-Lee, ubaba weWebhu, ulungiselela iphrojekthi entsha